Madaxweynaha Kenya oo sheegay in weerarkii hutel Dusit ee Nairobi lasoo afjaray - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeEast AfricaMadaxweynaha Kenya oo sheegay in weerarkii hutel Dusit ee Nairobi lasoo afjaray
January 16, 2019 Puntland Mirror East Africa, World 0
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dhammaan nimankii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday huteel kuyaala Nairobi la dilay lana soo afjaray 19-saacadood oo ay haysteen.
Hadal uu taleefishinka qaranka ka jeediyay, Kenyatta ayaa sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen weerarka.
Madaxweynaha ayaa sheegay in ka badan 700 qof oo shacab ah laga soo badbaadiyay goobta.
“Howlgalkii amni ee huteelka Dusit waa dhammaaday kulli argagixisadii waa la laayay,” ayuu yiri Kenyatta.
“Waxaanu xaqiijinay in 14 qof oo birimagaydho ah ay nafootda ku waayeen gacanta argagixisada, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.”
Maleeshiyada Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya oo horey weeraro uga geysatay dalka Kenya ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas.
Weerarka huteel Dusit waa kii kowaad oo ka dhaca gudaha Nairobi tan iyo markii niman hubeysan oo katirsanaa Al-Shabaab ay weerareen dukaan weynaha Westgate sanadkii 2013, laguna dilay ugu yaraan 67 qof.